News - Ọrụ nke nkwakọ ngwaahịa
N'ikwu okwu n'ozuzu, ngwaahịa nwere ike ịnwe ọtụtụ nchịkọta. Akpa eze ahụ nwere ezé ezé na-enwekarị katọn n'èzí, a ga-etinyekwa kaadiboodu n'èzí katọn maka njem na njikwa. Nkwakọ ngwaahịa na mbipụta akwụkwọ nwere ọrụ anọ dị iche iche. Taa, nchịkọta akụkọ nke China Paper Net ga-akpọrọ gị ịmụtakwu banyere ọdịnaya dị mkpa.
Nkwakọ ngwaahịa nwere ọrụ anọ:
(1) Nke a bụ ọrụ kachasị mkpa. Ọ na-ezo aka n'ichebe ngwongwo ngwugwu pụọ n'ihe egwu na mbibi dịka nchapu, nsị, izu ohi, ọnwụ, mgbasa, ịkwa iko, ịda mba, na ịchapụ. N'ime oge site na mmepụta iji mee ihe, usoro nchebe dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na nkwakọ ngwaahịa enweghị ike ichebe ọdịnaya ahụ, ụdị nkwakọ ngwaahịa a bụ ọdịda.
(2) Na-enye nkasi obi. Ndị na-emepụta, ndị ahịa, na ndị ahịa kwesịrị ịkwaga ngwaahịa site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. Ezé ezé ma ọ bụ mbọ aka nwere ike ịmegharị ngwa ngwa na ụlọ nkwakọba ihe site na itinye ha na katọn. Ngwunye nkwakọba ihe nke pickles na ịsacha ntụ ntụ emetụtala nke obere obere gbanwere site na nkwakọ ngwaahịa; N'oge a, ọ dị nnọọ mma maka ndị na-azụ ahịa ịzụta ma laa n'ụlọ.
(3) Maka njirimara, ụdị ngwaahịa, nke ukwu, akara na aha onye nrụpụta ma ọ bụ onye na-ere ahịa ga-egosi na ngwugwu ahụ. Nkwakọ ngwaahịa nwere ike inyere ndị na-elekọta ụlọ nkwakọba ihe aka ịchọta ngwaahịa n'ụzọ ziri ezi, ọ nwekwara ike inyere ndị na-azụ ahịa aka ịchọta ihe ha chọrọ.
(4) Kwalite ire ahịa nke ụdị ụfọdụ, ọkachasị n'ụlọ ahịa ndị ahọpụtara n'onwe ha. Na ụlọ ahịa, nkwakọ ngwaahịa na-adọta mmasị ndị ahịa ma nwee ike ịgbanwe uche ya gaa mmasị. Fọdụ ndị na-eche na “igbe mbadamba ọ bụla bụ bọọdụ mkpọsa.” Ezi nkwakọ ngwaahịa nwere ike ime ka ngwaahịa ọhụrụ dịkwuo mma, uru nke nkwakọ ngwaahịa n'onwe ya nwekwara ike ịkwali ndị na-azụ ahịa ịzụta ụfọdụ ngwaahịa. Na mgbakwunye, ịbawanye mma nke nkwakọ ngwaahịa dị ọnụ ala karịa ịba ụba ọnụahịa nke ngwaahịa ahụ.